ကသာဈေး မီးလောင်မှု ဓာတ်ပုံများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကသာဈေး မီးလောင်မှု ဓာတ်ပုံများ
ကသာဈေး မီးလောင်မှု ဓာတ်ပုံများ
Posted by သော်ကြီး on Mar 8, 2012 in Copy/Paste | 19 comments
ပေါ့ဆမီး ၊ ၀ါယာရှော့မီး အထူး သတိပြုပါ
ဈေးအတွင်း မီးလောင်ပြီးစ မြင်ကွင်း
ဈေး၏ မြောက်ဘက်ခြမ်း ရဲစခန်းဘက်သို့ မြင်ရပုံ
ဈေးအရှေ့ဘက်အခြမ်း လူနေအိမ် ဆိုင်ခန်းများ မီးလောင်ထားရှိမှု
ယခု နောက်ပိုင်း သတင်းများအရ ဈေးဆိုင်ခန်းများအပြင် ဈေးအရှေ့ဘက်ရှိ လူနေအိမ် ( ၂၀ ) ကျော်ခန့် မီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း။ ထိုလူနေအိမ်များသည် အိမ်အောက်ထပ်တွင် ဈေးဆိုင်ခန်းဖွင့်လှစ်ရောင်းချ သော ကိုယ်ပိုင်အိမ်များဖြစ်ကြောင်း။
ဈေးအတွင်းမီးလောင်ကျွမ်းခံရသော ဆိုင်ခန်းများမှာလည်း အ၀တ်အထည်နှင့်လူသုံးကုန် ပစ္စည်းများ စောင်များ။အိပ်ရာခင်းများ၊ ရောင်းချသော ဆိုင်ခန်းအများစုဖြစ်ကြောင်း ။
၀ါယာ. ရှော့ပဲ ဖြစ်မှာပေါ့..
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဈေးကြီးတွေတော်တော်များများ မီးလောင်ဆုံးရှုံးနေတာဘာကြောင့်လဲ???
ဟုတ်တယ်ဗျာ။မနေ့ ကဘဲ သိလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာ။ဈေးတည်ဆောက်ပုံက
သံတွဲဈေးနဲ့ ဆင်လိုက်တာဗျာ။အားလုံး ပြာပုံဘဝရောက်သွားပြန်ပီ။ဒီမှာတော့ လူနေ
အိမ်တွေမပါပေမယ့် ခုတော့လူနေအိမ်တွေပါ ပါသွားတော့ စိတ်မကောင်းစရာဗျာ။
မီးသတ်ကား တွေ မီးသတ်ရဲဘော်တွေ မတွေ့ပါလား…
ဈေးမှအရင်ဦးဆုံး စတင်လောင်ကျွမ်းခြင်းမဟုတ်ကြောင်း၊ ဈေးအပြင်ဘက်ရှိ လူနေအိမ်ဆိုင်ခန်းမှ ၀ါယာရှော့ ဖြစ်ရာမှ စတင်ခဲ့ကြောင်း၊ ထိုမှတစ်ဆင့် လမ်းနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင် ဈေးအတွင်းသို့ ကူးစက်လောင် ကျွမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း။
စတင်လောင်ကျွမ်းသော လူနေအိမ်မှာ နှစ်ထပ်အိမ်ဖြစ်ပြီး အောက်ထပ်တွင် ၀ါးနှင့်ပြုလုပ်ထားသော ခြင်း တောင်းများ၊နှီးများနှင့် အခြားလယ်ယာသုံးပစ္စည်များရောင်းချသော ဆိုင်ဖြစ်ပါ ကြောင်း။ အများပြောပြချက်အရ ( မီးလောင်နေသော ခြင်းတောင်းအား မီးဆက်လက်မလောင်ကျွမ်းစေရန် လမ်းပေါ်သို့ ပစ်လိုက်ရာ လမ်းပေါ်သို့မကျပဲ ဈေးအတွင်းသို့ ကျရောက်၍ ဈေးသို့ မီးကူးစက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း။ အိမ်ရှင်အနေဖြင့် မီးလောင်ရာ သက်ဆိုင်ရာသို့ အကြောင်းမကြားပဲ ကိုယ်တိုင်ငြိမ်းသတ်နေရာမှ မီးအားများလာမှ အနီးအနားမှ မြင့်တွေ့၍ ၀ိုင်းဝန်းငြိမ်းသတ် ကြရာ နိုင်နင်းခြင်းမရှိ၍ အပြင်းအထန်လောင်ကျွမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း။ အဆိုပါ လောင် ကျွမ်းခဲ့သော ဈေးသည် ဧရာဝတီမြစ်နှင့်၂ ဖာလုံခန့်သာကွာဝေးပါကြောင်း။စတင်မီးငြိမ်းသတ်ရာတွင် မီးသတ် ကားမှာ ရောက်ရှိလာသော်လည်း ရေမပါရှိ၍ မီးငြိမ်းသတ်၍ မရပါကြောင်း။ဒုတိယတစ်စီးမှာလည်း ရေပါလာသော်လည်း ငြိမ်းသတ်ရန် ပိုက်မပါရှိခဲ့ကြောင်း၊ အဆိုပါဈေးနှင့်အိမ်တန်းမှာ အစိုးရမီးသတ်ဌာနနှင့် လမ်းတစ်လမ်းသာ ခြားပါကြောင်း။
အွန် မီးသက်ကား နှစ်စီးလာတာ တစ်စီးက ရေမပါ၊ ရေမပါတဲ့ ကားကျတော့ ပိုက်မပါဟုတ်လား မထူးပါဘူး နှစ်စီးလုံး မီးလောင်တဲ့အထဲတစ်ခါတည်းထည့်ပေးလိုက်ရောပေါ့
ကိုသူရဇော် ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင် ၊ ဘာလို့ ဆီကုန်ခံနေသေးလဲ လို့ ။
အွန် မီးသက်ကား နှစ်စီးလာတာ တစ်စီးက ရေမပါ၊ ရေပါတဲ့ ကားကျတော့ ပိုက်မပါဟုတ်လား မထူးပါဘူး နှစ်စီးလုံး မီးလောင်တဲ့အထဲတစ်ခါတည်းထည့်ပေးလိုက်ရောပေါ့
မီးလောင်ရင် ၀ါယာရှော့၊ ခြင်ဆေးခွေလို့ ပဲ ပြောကြတာချည်းပါပဲ။
ခြင်းတောင်းတစ်တောင်းကြောင့် ဈေးပြာကျတယ်ဆိုတာတော့ ……
(၇.၃.၂၀၁၂)ရက်နေ့၊ နံနက်ကဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကသာစည်ပင်ဈေးမီးလောင်မှုသို့
သွားရောက်ခဲ့သည့် ကသာနှင့်နီးစပ်တဲ့မြို့တွေက မီးသတ်ကားတွေထဲက ၀န်းသို
အရန်မီးသတ်က မီးသတ်ကား(၁)စီးဟာ လမ်းအလွန်ကြမ်းတဲ့ မဲဇာအဆင်းမှာ တိမ်းမှောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။
သွားတာဖြစ်ကြောင်းလည်း ကသာမြို့ ခံက ဆက်လက်ပြောဆိုထားပါတယ်။
၀န်းသိုအရန်မီးသတ်က မီးသတ်ကား(၁)စီးဟာ လမ်းအလွန်ကြမ်းတဲ့ မဲဇာအဆင်းမှာ တိမ်းမှောက်ခဲ့ကြောင်း။အရန်မီးသတ်(၂)ယောက်သေဆုံးပြီး၊(၃)ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်။မမနွယ်ပင်ရေ ။ အဲဒီမီးစလောင်တဲ့ ဈေးအ၀င်လမ်းက ကျဉ်းပြီး ဆိုင်ရှေ့မှာ အမိုးများထုတ်ထား သောကြောင့် မီးသတ်ကားမှာလည်း လမ်းအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်မီးငြိမ်းသတ်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ကြောင်းပါ။ ၀န်းသိုမှ မီးသတ်ကား တိမ်းမှောက်မှုမှာ ( ၂ ) ဦးသေ၊ ( ၃ ) ဦးဒဏ်ရာရရာ ဒဏ်ရာရသူ တစ်ဦးမှာ ပြင်ထန်ခြင်းမရှိ၍ နေရပ်သို့ ပြန်သွာပြီးဖြစ်ကြောင်း ၊ သေဆုံးသူတစ်ဦးမှာ အဆိုပါပြန်သွားသူနှင့် ညီအစ်ကိုတော်စပ်ကြောင်း၊ ကျန်(၂) ဦးမှာ တစ်ဦးက နံရိုးကျိုးကြောင်း၊ ကျန်တစ်ဦးမှာ ဒူးဆစ်ရိုးအက်သွား ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ အဆိုပါဈေးမှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ( ၃၀ )ခန့်ကလည်း လောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။
ဘာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်လေ ကိုယ့်ကြောင့်သူများနစ်နားသွားတော့ ကိုယ်လည်းမကောင်းဘူး သူများလည်းဒုက္ခရောကိတာပေါ့
ကျနော်ဒီနေ့ ကသာမြို့ကို ရောက်ခဲ့ပါတယ်…
ကျနော်ရောက်သွားတဲ့ အထိ မီးကြွင်းမီးကျန်တွေကို
အဆိုပါမီးသတ်ကားများသည် အစိုးရ မီးသတ်ဦးစီးဌာနမှ သံသေ ဟုခေါ်သော မီးသတ်ကားများဖြစ်ကြောင်း။ အကူအညီ သွားရောက်ရသော မြို့နယ်မီးသတ်ကားများမှာ ကောလင်းမှ လွှဲပြီးကျန်မြို့နယ်များမှာ ဒေသအရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ၀ယ်ယူထားသော မီးသတ်ကား များဖြစ်ပါကြောင်း။ မီးလောင်နေစဉ် မီးငြိမ်းသတ်ရာ ကသာမြို့မှ မီးသတ်ကားမှာ မီးငြိမ်းသတ်နေရာမှ ပြန်လည်ထွက်ခွာမရတော့၍ ပြည်သူများမှ တွန်းထုတ်ခဲ့ရကြောင်း ပါ။ အင်းတော်မြို့မှ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ၀ယ်ယူထားသော မီးသတ်ကားအား ကသာမြို့ ပြည်သူလူထုမှ ကျေးဇူးတင်လျက်ရှိကြောင်း၊ အခြားမြို့နယ်မှ မီးသတ်ကားများအားလည်း ၀ိုင်းဝန် ချီးကျူးကြကြောင်းသိရှိရပါတယ် ခင်ဗျား။